Zuva: Chivabvu 21, 2020
Webhu dhizaini mafemu anogadzira zvigadzirwa zvewebsite vanofanirwa kuratidza masevhisi avo aine mamwe maitiro. Zvikasadaro, zvinogona kutungamirira panowanikwa zvakaipa uye zvisizvo basa uye kuti mabasa haazorambi kusvika chero mhinduro. [More ...]
Zvinonzi zviuru zana nemakumi manonwe zvegungwa mumakungwa epasi rose zvakamanikidzwa mumakungwa apo vanomanikidzwa kuwedzera zvibvumirano zvavo kakawanda nekuda kwekuputika kwe corona. Maererano nekokorodzano dzenyika dzakawanda, vafambisi vezvikepe vasati vatanga kubhadhara zororo. [More ...]
Mamiriro ekutenga kwechitifiketi akave akatemerwa neTURKAK mvumo inobvumidzwa masangano, akave akavambwa pasi pekudyidzana kwe Ministry of Culture and Tourism, uye anozopa zvitupa mukati merimiro re "Hutano Tourism Certification Program", inova imwe yemienzaniso yekutanga munyika. Turkish [More ...]
Nemashoko okuti chinoitwa Bazi Culture uye Tourism pamusoro 20.05.2020, zvave yakataura kuti inodzorwa normalization kwacho kwave hwakaitwa mukati yezvinoreva matanho kudzivisa kuparadzirwa Coronavirus (Covid-19) yatanga, uye zvichava operative musi kuti pakutsvaga rezvemukati. [More ...]
Kenani Çalışkan, sachigaro of Transportation Officer-Sen, TCDD Taşımacılık A.Ş. Vakashanyira General Manager pamusoro Kamuran Yazıcı pahofisi yake, uye akakumbira kuti Promotion pamusoro Title uye Kuchinja Title kubvunzurudzwa kuitwa zvakare. TCDD Taşımacılık A.Ş. General [More ...]
"Uri Kuziva Here?", Yakagadziridzwa mukudyidzana ne İGA uye Dzivirira Yako Garbage Foundation, nechinangwa chekusimudza ziviso munharaunda nezvezvinokonzeresa marara pane zvakatipoteredza uye kukosha kwekudzokorodza. National Photography uye pfupi Vhidhiyo Makwikwi akapedzwa. [More ...]
Meya Kayseri Metropolitan Municipality Memduh Büyükkılıç vakati mberi mabasa avo kuti kufaranuka motokari uye kuwedzera chokufambisa nyaradzo pasina kuderera. Mayor Büyükkılıç, uyo anotevera mabasa panguva DSI Crossroad, kunowedzera motokari vaiitwa Kayseri motokari. [More ...]
Mars Logistics yakava kambani yekutanga kushandisa iyo Marmaray mutsetse wekutakura zvinhu kunze kwenyika. Mars Logistics yepasiripo yekutakura zvinhu nechitima kubva Chivabvu 15 sezvakarongwa kuitiswa muTurkey seyokutanga Marmaray [More ...]
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu uye nezvekuvaka. Adil Karaismailoğlu akati kureba kwetara yeKonya-Karaman ndeye makiromita zana ndokuti, "Nzvimbo dzayo nezvipenga zvapera." Zvidzidzo zvedu zvechiratidzo zvinoramba zvichienderera. Ndinovimba chinangwa chedu kutanga bhizimusi mukupera kwegore. ” [More ...]
Turkcell, Zimbabwe Turk Telekom uye Vodafone kupa 1 GB Eid al-Fitr chipo. With kugutsikana ichi zvikuru kugadzirira zvizvarwa zvedu vanotsvaka paIndaneti pachena internet mishandirapamwe, vose nguva pamba [More ...]
TCDD Tasimacilik inyaya yekuda kuziva kana masevhisi eExpress Express, Tourismistic Express uye Van Lake Express, akamiswa nekuda kwedenda re coronavirus, achatanga. Inakidzwa nevafambi, vemifananidzo uye vateveri [More ...]
PULAT AKS uye Yakasarudzika Package kubva kuAsELSAN kuenda ku ACV-15
ASELSAN, inova mota yeTurkey yekudzivirira indasitiri, iri kutogadzirira ramangwana reuto muchiita zvirongwa zvekusangana nezvazvino zveTurkey Mauto. Kunyange kutsanya-siyana kuti nhasi kurwisa ezvinhu, [More ...]
Mutungamiri Erdoğan vakaita bvunzo kuBaşakşehir Çam uye kuSakura City Hospital chipembere isati yatanga. Kugamuchira ruzivo kubva kune zviremera, Erdogan, Gurukota rehutano Dr. Fahrettin Koca akaperekedzwa nemamwe mapato aifarira. Mukutaura kwake pamhemberero yekutanga, maJapan [More ...]
MuKiptaş Silivri 3rd Stage Social Housing Project, makamuri evane chiuru chimwe nemakumi mana nemakumi mana nevano kubatsirwa anotsanangurwa nekutora mijenya ne İBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu. Kuswedera, uyo achatora nzvimbo mangwana kubudikidza gweta, İBB uye Kiptaş [More ...]
Kudzivirirwa kweTurk, inova mumwe wevatsigiri veTurkey ASELSAN masangano anodzivirira indasitiri; anotakura akangwara mfuti dzematangi nemotokari dzehondo. Ammunition ine 35 mm Particle ASELSAN inopa TÜBİTAK SAGE uye MKE [More ...]
Izmir Metropolitan Municipality yakatanga tsika yekutenderera muKordonboyu, inowanzoitwa nezviuru zvevanhu kunyanya mumwedzi yezhizha. Izmir vagari vagutsikana nemashandisirwo acho. Coronavirus matanho anokanganisa padivi rematanho ekusimudza Izmir Metropolitan Municipality kuTurkey [More ...]
Mutungamiri weDziviriro Yezvidziviriro, STM FungaTech yakaziva pamhepo uye inorarama. Dr. İsmail Demir uye ASELSAN Sachigaro uye General Manager Prof. Dr. Haluk Görgün, General Manager pamusoro TUSAŞ [More ...]
Zihni Derin (akaberekwa 1880, Muğla - zuva rokufa August 25, 1965, Ankara), Turkish agronomist, mudzidzisi. Of the kurimwa muTurkey kwakakonzera mharuro uye kupararira; Unonzi ari "baba tii". Muna 1880 [More ...]
Mutungamiri weDziviriro Yezvigadzirwa Dr. Padanha yakarongedzwa ne STM FungaTech, İsmail DEMİR akataura nezve purojekiti yeJoint Strike F-F-35 Mheni II. In mashoko chakaitwa President DEMİR, "United States of America [More ...]
Engin Arık (14 Gumiguru 1948 - 30 Mbudzi 2007) aive mutungamiriri weTurkey fizikisi uye aimbova purofesa weBoğaziçi University Physics department. The Thorium yangu inogona kuva akachena uye mari dambudziko simba. [More ...]
Nechiitiko chakawanikwa kubva kuT-629, T-129 ATAK Attack uye Tactical Reconnaissance Helicopter Project, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Iyo yekurwisa helikopta yakagadziriswa na (TUSAŞ). Turkish Anga uye Space Viwanda [More ...]
Mahmut Özer, weGurukota National Education, akaudza pepanhau pamusoro wake post-dambudziko urongwa R & D nzvimbo hwakagadzwa dzakakwirira zvikoro yekosi. Özer akati, "Tichava nenzvimbo dzinosvika makumi maviri dzeR & D. Mumwe pakati zvakasiyana [More ...]
Minister of Agriculture uye Forestry Bekir Pakdemirli akazivisa kuti makuru eTurkey mabhizinesi ezvekurima, ayo Şanlıurfa Ceylanpınar State Farm anounza makumi matanhatu emazana mahekita emari yekudyara yakapera uye Chivabvu 60, 22 [More ...]
Nhasi, Başakşehir Çam uye Sakura City Hospital vakapinda musimba rakazara nekutora chikamu kweMutungamiri Recep Tayyip Erdoğan uye Prime Minister weJapan Shinzo Abe. Zvichava kukwanisa kutora 35 zviuru outpatients daily uye 500 zvinhu [More ...]